जोेगमाया चापागाई गजल पुरस्कार कमललाई प्रदान
काठमाडौं / जोगमाया चापागाई गजल पुरस्कार यस वर्ष कमल संघर्षको सडकलाई प्रदान गरिएको छ । गत वर्ष प्रकाशन भएको कमलको सडक गजल संग्रहले यो वर्षको जोगमाया चापागाई गजल पुरस्कार पाएको हो । अब छिटै उनको गजल संग्रहको दोस्रो संस्करण आउँदै छ ।
गत वर्ष प्रकाशन भएको उक्त गजल संग्रहलाई ताम्रपत्र र २५ हजार नगदसहित पुरस्कृत गरिएको हो । शनिबार कालिकास्थानस्थित सर्वनाम थिएटरमा आयोजित कार्यक्रममा पुरस्कार वितरण गरिएको हो ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि गजलकार ज्ञानुवाकर पौडेलले वर्तमान साहित्य लेखनमा साध्य भए पनि साधना नभएको भन्दै भोलिको युग गजलको हुने बताए । त्यस्तै कार्यक्रमका सभापति सुदामा चापागाईले तेस्रो वर्षमा सुरु भएको पुरस्कार वितरण हरेक वर्ष गजल साहित्यलाई प्रदान गर्न पाउँदा आफूलाई खुसी लागेको बताए ।
त्यस्तै गजलकार पूर्ण रावलले कमल संघर्षको लेखाइबाट आफूलाई सन्तुष्टि मिलेको बताउँदै जोगमाया चापागाई पुरस्कार कमल र उनको सडकले पाउँदा आफ्नो भावना समेत पुरस्कृत भएको भन्दै कमल गजल लेखनमा कमल जाज्वल्यमान तारा बन्ने बताए ।
२५ हजार नगरसहित ताम्रपत्रले सम्मानित कमलले पुरस्कारबाट आफूमा थप जिम्मेवारी बढेको बताउँदै गजल लेखनमा अझ सशक्त ढंगले लाग्ने बताए ।
तिहार आएको छ ! (गजल)
अब चै बिश्वास गर्ने आधार आएको छ पोको पारेर रुमालमा प्यार आएको छ ! अस्ति दशैँ आएथ्यो बाआमा रुवायो भोली बैनी रुवाउने तिहार आएको छ ! बाबाको सिरानीमुनि तमसुक भेटेपछि भाई पनी मसँगै कतार आएको
कमजोर तिमी नहोउ फेरि आएर देखाउ आमा । सकिएछन् सपूत यहाँ जन्माएर देखाउ आमा । जन्माउन भन्दा बचाउन कठिन रहेछ यहाँ, कयौं सपूत मरे अब बचाएर देखाउ आमा । कोहिले महाकाली बेचे कोहिले कालापानी
छन तिम्रा तस्विर मेरा आँखामा छन! केही मुटुमा केही यि हत्केलामा छन!! एकमुठी प्राण बचाऊनकै खातिर कोही साऊदी कोही मलेसियामा छन!! यसपालीको तिहारमा यस्तै गर्नु दिदी लगाईदिनु टिका मेरा तस्विर भित्तामा छन!! मलाई बिदाई गर्ने भनेर
देखेपछि नै सम्बन्ध बोलचाल, सम्म पुछ । बुझ्नुस,पैतालाको धुलो कपाल, सम्म पुग्छ । बरु मसानघाट सम्मपुग्ने साथी कमाउनु, पैसा जाबो त यहीँ अस्पताल, सम्म पुग्छ । आमाले त्यतिबेला खुशीको उत्सव मनाउछिन, जब छोरा हिन्दै-हिन्दै पर